Rasaas sababtay khasaare oo ka dhacday Hargeysa iyo rabshado laga cabsi qabo | Somsoon
Home WARAR Rasaas sababtay khasaare oo ka dhacday Hargeysa iyo rabshado laga cabsi qabo
Rasaas sababtay khasaare oo ka dhacday Hargeysa iyo rabshado laga cabsi qabo
Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland ayaa sheegaya inay sii xoogeysatay xiisada ka taagan magaaladaasi.
Rabashado u dhexeeya taageerayaasha xisbiga Wadani iyo ciidamada ammaanka ayaa ka socda afaafka hore ee xarunta weyn ee xisbigai, sida ay noo xaqiijiyeen dad ku sugan halkaas.
Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Wadani, Cabdiraxmaan Cirro uu gaaray xarunta xisbiga oo la soo dhoobay ciidamo Boolis ah, kadibna uu xoog ku galay xarunta, taas oo sababtay in rasaas ay ku furaan ciidamada.
Guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro oo xarunta kula hadlay taageerayaasha xisbiga waxa uu sheegay in hal askari looga dhaawacay rasaastii ay ku rideen ciidamada booliska.
Xaaladda ayaa hadda kacsan, waxaana laga cabsi qabaa in dibadbaxyo ay ka dhacaan Hargeysa, kuwaas oo uu shalay iclaamiyey guddoomiyaha xisbiga m Wadani, sidoo kale saakay ayuu marka Cirro ka dalbaday taageerayaasha in dibadbaxyada ay ka bilaabaan dhamaan gobolada Somaliland.
Arrinta ayaa ka sii dartay, kadib markii xalay ciidamada Booliska Somaliland ay xir xireen xubno ka tirsanaa xisbiga oo si weyn uga soo horjeeda xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi.
Taliyaha Booliska Somaliland oo Hargeysa kula hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in aan la aqbali karin inay dibadbaxyo dhacaan, isagoo guddoomiyaha Xisbiga Wadani ka dalbaday inuu xaaladda dajiyo kana baaqsado dibadbaxyada uu ku dhawaaqay.
Article horeMas’uul ka tirsanaa maamulka Kismaayo oo toogasho lagu dilay
Article socoda Shir u socdo xubno ka tirsan dowladda iyo Dowlad Goboleedyada